Ny 3D Touch an'ny iPhone 7 dia ho toy ny iPhone 6s | Vaovao IPhone
Ny mpandalina malaza indrindra raha ny zava-drehetra mifandraika amin'i Apple dia miverina amin'ny laoniny. Tamin'ny fanadihadiana vaovao, izay nahazoan'ny MacRumors fidirana, dia nilaza momba ireo fitaovana iOS manaraka izay ho tonga amin'ny 2016 izy ary mino fa amin'ny herintaona dia hisy ny kinova Air an'ny iPad. Ming Chi-Kuo mino fa ny iPad Air 3 Tsy ho avy amin'ny rafitra fanekena tsindry toy ny iPhone 6s izy io, fa hampiasa efijery toa ilay tamin'ny maodely teo aloha sy ny iPad Pro izay natomboka tamin'ny volana lasa teo. Ny antony: olan'ny famokarana (zavatra tsy naharesy lahatra ahy manokana).
Ny zava-drehetra hoy ny mpandalina, ny iPad Air 3 dia ho tonga amin'ny teny ifotony izay hotanana tamin'ny volana martsa, zavatra heveriko fa misy dikany mba hamerenana ny daty fampisehoana ny takelaka paoma izay nampiasaina mandra-pahatongan'ny iPad taranaka fahefatra. Noho izany, na inona na inona solosaina, ny iPad mahazatra dia hatolotra amin'ny volana martsa miaraka amin'ny iPhone 4-inch sy Apple Watch. Amin'ny volana oktobra ny iPhone, ny mini iPad (raha tsy mijanona ny fanaovana azy) ary ny iPad Pro dia haseho.
Kuo koa miresaka momba iPhone 7, saingy tsy milaza amintsika zavatra tsy azontsika an-tsaina an'iza akory izany rehefa milaza fa ny 3D Touch izay hampidirina ao amin'ilay maodely vaovao dia hampiasa teknolojia mitovy amin'ny an'ny iPhone 6s. Raha mampiasa teknolojia mitovy amin'izany ianao (tsy mitovy) dia mety ho kinova maoderina kokoa amin'ny rafi-pamantarana tsindry, zavatra toa ny zava-nitranga tamin'ny Touch ID an'ny iPhone 6s, izay mampiasa ny taranaka faharoa amin'ny mpamaky rantsantanana. Na izany na tsy izany, toa tsy dia nisy toa izany raha toa ka mampiasa ny andiany voalohany amin'ny Force Touch ny Apple Watch ary mampiasa ny iPhone 6s ny faharoa, amin'ny taona ho avy dia hisy taranaka fahatelo an'ny Force touch (na faharoa amin'ny 3D Touch).
Mikasika ny famelabelarany dia tsy milaza vaovao momba izany ihany koa i Kuo halefa amin'ny volana septambra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Air » [RUMOR] Ny 3D Touch an'ny iPhone 7 dia hitovy amin'ny iPhone 6s; iPad Air 3 tamin'ny 2016
Samsung dia miantso ny didim-pitsarana manery azy handoa $ 548 tapitrisa amin'i Apple
Ny tranga tsara indrindra ho an'ny iPhone